Outlook Express Ithuluzi Lokulungisa. Outlook Express Lungisa isoftware.
DataNumen Outlook Express Repair iyona engcono kunazo Outlook Express ithuluzi lokulungisa nokubuyisa emhlabeni. Ingalungisa abonakele Outlook Express Amafayela we-DBX ne-MBX futhi alulame ama-imeyili akho ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela anciphise ukulahleka kokonakala kwefayela.
Qaphela: Sicela usebenzise DataNumen Outlook Repair ukuthola ama-imeyili nezinye izinto kusuka kumafayili we-Outlook PST akhohlakele.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,619)
Kungani DataNumen Outlook Express Repair?
Izinga lokutakula yi-most umbandela obalulekile we Outlook Express umkhiqizo wokutakula idatha. Ngokususelwa ekuhlolweni kwethu okuphelele, DataNumen Outlook Express Repair inezinga lokululama elihle kakhulu, ingcono kakhulu kunanoma iyiphi enye imbangi emakethe!
Funda kabanzi mayelana nokuthi kanjani DataNumen Outlook Express Repair kubhema umncintiswano
Ngikuhalalisela nge-DOER yakho okuwukuphela kwesoftware engizamile engabuyisela noma iyiphi ye-dbx yami ekhohlakele.
Ngiyabonga kakhulu ngokwenza inguqulo yakho yedemo itholakale kubantu abanjalo
njengabahola impesheni (engingomunye wabo).
Ukuhumusha okuzimele nokuthuthukiswa kwewebhusayithi
ICarletonville, eNingizimu Afrika
Ekugcineni - umkhiqizo owenza lokho ekushoyo ngendlela eqondile engenangqondo nomphumela omuhle. Wenze kahle! Ngifisa sengathi ngingawuthola umkhiqizo wakho ngaphambili
Ekugcineni - umkhiqizo owenza lokho ekushoyo ngendlela eqondile engenangqondo nomphumela omuhle. Wenze kahle! Ngifisa ukuthi ngithole umkhiqizo wakho ngaphambi kokuchitha imali yami kubazenzisi abaningi laphaya.
Umzamo wami wokuthola kabusha nge-DOER manje usuyi-100%.
NGIYABONGA! Ilungisiwe futhi yagcinwa ku-flash drive ngaphambi kokuthi ngilahle i-IE ne-OE !!!
ngiyayithanda futhi ngicabanga ukuthi ngizoyithenga
Umkami wenza yonke le nto.
Ngokujabulisayo nganginawo wonke amafayela e-dbx enziwe isipele kusukela ngoNovemba 19 futhi wonke amanye ayekhona
Ngokujabulisayo nganginamafayela e-dbx wonke emuva kusukela ngoNovemba 19 futhi wonke amanye ayeseseva ye-imeyili, ngakho-ke lapho sengilungisiwe, ngakhipha ama-imeyili angama-95, kepha KWAKUKHO KWONKE lapho.
Ifaneleka kalula imali engama-50.
Ngisanda kuthenga futhi ngisebenzise i-DOER ukuthola elinye lamafayela womsebenzisi wami .dbx ebengaphezu kuka-2GB. Kusebenze kahle - ngiyabonga ngomkhiqizo owusizo kakhulu.
Bengilokhu ngilwa kanzima ukuthola iminyaka eyi-4 ye-imeyili kusuka ku-hard drive yami eshayisile isonto eledlule noma kunjalo.
Usebenzise inguqulo yedemo ye-DOER -
Usebenzise inguqulo yedemo ye-DOER - ayenzi ubulungiswa obugcwele !! I-full version ithole i-100% yemeyili yami - yeka isoftware emnandi - intengo enhle nayo.
Ngiyabonga, ngiyisebenzisile. Umkhiqizo omuhle - isisindisi sempilo!
Ngithengile DataNumen Outlook Express Repair ngiphinde ngawathola ngempumelelo amafolda kwifolda yami athe ngandlela thile anyamalala kuhlu lwami lwe-OE. Okwakho
Ngithengile DataNumen Outlook Express Repair ngiphinde ngawathola ngempumelelo amafolda kwifolda yami athe ngandlela thile anyamalala kuhlu lwami lwe-OE. Umkhiqizo wakho usebenze kahle; Ngiyabonga.
UNathaniel W. Pierce
Isoftware yakho ingisizile kakhulu, ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga kakhulu !!!!!!!!!!
UMorganite Brasil Ltda.
Ngiyabonga ngemibono yenu.
Unomkhiqizo omuhle kakhulu.Ungibuyisele amafayela amaningi.
U-Arthur J Wehlow
Izixazululo ze-Manager Express Accounting
IPort Macquarie NSW 2444, e-USA
Ngithengile namuhla yakho Advanced Outlook Express Repair - Siyakuhalalisela, kusebenze ngokumangalisayo!
Ngaphandle kwezinto ezithile,
Ngaphandle kwezinto ezithile ezincane, njenge-shimering log ngesikhathi somsebenzi wokuthola, noma, ukuhlelwa kokuqukethwe kwefayela le-Inbox dbx kumafayili ama-2 anenkathi efanayo yama-imeyili. Yebo, ngicele isoftware ukuthi idale elinye ifayela elinama-imeyili atholakele ngemuva kokuthola ama-imeyili angama-2000, kepha, bengilindele ukuthola amafayili amabili alandelanayo maqondana nezinsuku ze-imeyili, hhayi izehlakalo ezimangazayo zamafolda ama-2 anenkathi efanayo wesikhathi ama-imeyili!
Kepha, njengoba ngishilo ngaphambili, lezi yizinto ezincane, futhi ngaphezu kwakho konke, ngiyaziqhenya ngomsebenzi owenziwe yisoftware yakho, futhi nakanjani ngizowuncoma kubangani.
Ngikufisela impumelelo enkulu ekwakheni nasekwakheni izinhlelo ezinjalo!
Ngiyabonga kakhulu, Ozithobayo,
Umhlahlandlela Womoya WeYigal
Siyabonga ngempendulo yakho - thokozela usizo lwakho.
Empeleni, ngithenge i-AOER izolo, nayo yonke i-lost ama-imeyili atholakele !!
I-AOER ibonakala isebenza kahle, futhi kufanele ilungise zonke izinkinga zami ze-OE!
I-Albuquerque, NM, e-USA
Bengino-lost ama-imeyili abalulekile ngesikhathi sokuhlanganiswa futhi angazi ukuthi uzowathola kanjani noma uwavule kabusha. Umkhiqizo wakho uxazulule ukukhishwa
Bengino-lost ama-imeyili abalulekile ngesikhathi sokuhlanganiswa futhi angazi ukuthi uzowathola kanjani noma uwavule kabusha. Umkhiqizo wakho uxazulule ukukhishwa (ekugcineni).
Kodwa-ke, kufanele uchazele ama-ludites anjengami ukuthi noma imuphi amalangabi e-BAK angaqanjwa kabusha ngokuthi i-DBX. Umfundi we-most ifayili elibi engangilifuna laqanjwa ngokuthi yi-BAK (engiqonda ukuthi kungenzeka lenzekile ekuhlanganiseni) futhi kwangithatha usuku lokucwaninga ukuthola ukuthi ngingashintsha igama lefayela bese ngisebenzisa umkhiqizo wakho ukwenza okunye. Lapho sengikusebenzisile lokho kwasebenza njengokwelashwa!
Izici eziyinhloko ku DataNumen Outlook Express Repair v2.5
Ukusekelwa ukuze uthole kabusha Outlook Express Amafayela ama-4 mbx kanye Outlook Express Amafayela we-5/6 dbx.
Ukusekela ukuthola amafayela we-dbx namafayela we-mbx kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo lamafayela e-dbx namafayela we-mbx.
Ukusekela ukulungisa amafayela we-dbx ne-mbx aze afike ku-4GB, ngakho-ke ingalungisa amafayela e-dbx anenkinga ye-2GB.
Ukusekelwa ukuze uthole kabusha Outlook Express idatha kusuka kuthempelirary .dbt amafayela.
Ukusekela ukuthola nokukhetha amafayela e-dbx noma e-mbx azolungiswa kukhompyutha yendawo.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ifayela le-dbx ngemenyu yokuqukethwe ye-Windows Explorer kalula.
Amapharamitha womugqa wokusekela (i-DOS prompt), ukuze ukwazi ukucela i-DOER kusuka kuhlelo lwakho.
Ukusebenzisa DataNumen Outlook Express Repair Ukubuyisa Outlook Express Ama-imeyili
Outlook Express igcina wonke ama-imeyili kumafayela we-.dbx. Isibonelo, ifayela le-Inbox.dbx liqukethe ama-imeyili ku-Inbox, ifayela le-Outbox.dbx liqukethe ama-imeyili ku-Outbox, njalonjalo.
Uma ifayela le-.dbx lonakele futhi ungakwazi ukufinyelela ama-imeyili akulo, ungasebenzisa DataNumen Outlook Express Repair ukuthola ama-imeyili akho kuwo. Ama-imeyili atholiwe agcinwa njengamafayela we-.eml angangeniswa kalula emuva kuwo Outlook Express.
Thola ifayela le-.dbx elonakele noma le-.mbx ukulungiswa uma ungakakwenzi lokho.
Qaphela: Ngaphambi kokulungisa ifayili elonakele le-dbx noma le-mbx nge DataNumen Outlook Express Repair, ngicela uvale Outlook Express kanye nanoma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha ifayela.
Khetha ifayili elonakele le-dbx noma le-mbx elizolungiswa:
Ungafaka i-dbx noma igama lefayela le-mbx ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola i-dbx noma ifayela le-mbx elizolungiswa kukhompyutha yendawo.
Ngephutha, DataNumen Outlook Express Repair izokhipha yonke imilayezo etholakele kuhla lwemibhalo xxxx_recovered, lapho i-xxxx igama lefayela elonakele le-dbx noma le-mbx. Isibonelo, ngefayela le-Inbox.dbx, umkhombandlela wokukhipha okuzenzakalelayo uzoba yi-Inbox_recovered. Uma ufuna ukusebenzisa esinye isiqondisi, sicela usikhethe ngokufanele:
Chofoza inkinobho, DataNumen Outlook Express Repair intando start ukuthola ama-imeyili avela kufayela elonakele le-dbx noma le-mbx. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, uma kukhona imilayezo etholakele efayeleni le-dbx noma le-mbx ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo kanjena:
DataNumen Outlook Express Repair 2.5 ikhishwa ngoDisemba 24, 2020
DataNumen Outlook Express Repair 2.3 ikhishwa ngoNovemba 9, 2020
DataNumen Outlook Express Repair 2.2 ikhishwa ngoSepthemba 28, 2013
DataNumen Outlook Express Repair 2.1 ikhishwa ngoJulayi 7, 2009
DataNumen Outlook Express Repair 2.0 ikhishwe ngoJanuwari 29, 2009
DataNumen Outlook Express Repair 1.5 ikhishwe ngomhla ka-6 Disemba 2006
Thuthukisa isivinini sokutakula.
Phinda uthole ama-imeyili asusiwe Outlook Express dbx amafayela.